Home Somali News Somaliland: Gar-sooreyaasha Maxkamadaha oo Loo Qeybiyay Buugga Hagaha Dacwadaha Ciqaabta ah
Gudoomiyaha gudida caddaalada ahna guddoomiyaha maxkamadda sare ee Somaliland Yuusuf Ismaaciil Cali, ayaa maanta u qaybiyey garsoorayaasha iyo guddoomiyayaasha ka hawl gala maxkamadaha darajada koowaad iyo darjada labaad ee dalka, buuga hagaha u noqon doona gar-qaadista dacwadaha ciqaabta ah.
Buugan ayaa iftiiminaya hanaanka loo raaco amaba loo rido dacwadaha ciqaabta ah isla markaasina waxa uu ka caawin doonaa in dhammaanba garsooreyaaasha kala duwan ee ku kala sugan maxkamadaha darajada koowaad iyo darajada labaad ee dalku ay soo saaraan go’aamo isku mid ah oo ku salaysan caddaalad.
“Ujeedada buugan sida ka muuqata waxay tahay hagaha garsoorayaasha ee xukun ku ridista ciqaabeed ee qaranka Somaliland, Waa sida kiisaska ciqaabta ah ee jamhuuriyada Somaliland ka dhaca ee maxkamadaha kala duwan laga furo looga soo saari lahaa xukun isku mida,”ayuu yidhi Guddoomiyaha Maxkamada sare.
Guddoomiyaha oo hadalkiisa sii watay waxa uu yidhi “Buugan waxa laga soo dheegay habka ciqaabta ah ee Jamhuuriyada Somaliland iyo xeerka ciqaabta ee Somaliland qoddobadii ku kala filiqsanaa ee la xidhidhayey ujeedada xukun ridista ama sababta ciqaabista dambiilayaasha laga leeyahay, wuxuu caawin doonaa oo buugani oo wax ka tari doonaa garsoorka kala duwan ee maxkamadaha dalka ka hawl-gala sidii ay ugu fududaan lahayd inay xukunno isku mid ah ka soo saaraan kiisaska kala duwan.”
“Tusaale ahaan, tuugo culus iyo tuugo fudud, inaanay tuugada culus siyaabo kala duwan u xukumin amaba tuugada fudud mid culus ku xukumin, inay xukunno isku mida wixii tuugo culus ah ka soo saaraan iyo qoddobadii ku qornaa xeerka ciqaabta badhkoodna ku qoran yihiin xeerka ciqaabta guud oo meel la iskugu soo ururiyay si ay ugu fududaato xaakimka inuu soo saaro xukunka iyo qoddobadii uu cuskan lahaa, sidoo kalana wuxuu wax tarayaa inaan dambiyo gobalo kala duwan ka dhacay oo isku nooca inay maxkamadaha kala duwani qaabab isku mida u xukumaan,”ayuu yidhi Yuusuf Ismaaciil Cali.
Cabdilaahi Cabdi Aadan oo ah sarkaal ka tirsan xafiiska daba galka dacwadaha ee gudida cadaalada ee Somaliland oo isagunu madashaa ka hadlay ayaa balan qaaday inay daba geli doonaan habka ay ugu dhaqmaan garsoorayaashu buugan hagaha u ah habka loo qaado dacwadaha ciqaabta ah.